ဦးဗုဓ် လို ဆရာတော်မျိုးရှိသင့်ပြီ – Lawkathuta
ဦးဗုဓ် လို ဆရာတော်မျိုးရှိသင့်ပြီ
ဗဟုသုတအစုံ May 15, 2018
အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး ကျောင်းသို့ရောက်စဉ်က ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်က ရေကန်အနီး တံမြက်လှည်းနေခိုက်ဖြစ်၍ ထိုနေရာ၌ပင် ဦးဗုဓ်ကို ဝပ်ချ အလေးပြု၏။ ထိုနောက်-
ဦးပေါ်ဦး။ ။ရေကန်ကြီးကဖြင့် အလွန် ကောင်းပါပေသည် ဘုရား။
ဦးဗုဓ် ။ ။အေး…..ကောင်းတယ်။
ဦးပေါ်ဦး။ ။ရေကလည်း အလွန် ကြည်တယ်။
ဦးဗုဓ် ။ ။အေး…..ကြည်တယ်။
ဦးပေါ်ဦး။ ။ဤရေကန်ကြီး မည်မျှ နက်ပါသနည်းဘုရား။
ဦးဗုဓ် ။ ။ငါ……မသိဘူး။
ဦးပေါ်ဦး ။ ။ဆရာတော် သီတင်းသုံးတော်မူသောကျောင်းတိုက်အတွင်း ဖြစ်၍ နီးသည့်အတွက် သိလိမ့်မည် ထင်မှတ်၍ လျှောက်မိပါသည် ဘုရား။
ဦးဗုဓ် ။ ။နီးတိုင်း သိရမည်ဆိုလျှင် သင်၏နှုတ်ခမ်းမွှေး ဘယ်နှပင် ရှိသနည်း။
ဦးပေါ်ဦး။ ။သတိမထားမိ၍ ဘယ်နှပင်ရှိကြောင်းမသိပါ ဘုရား။
ဦးဗုဓ် ။ ။သင့်နှုတ်ခမ်းမွှေး ဘယ်နှပင်ရှိသည်ဟု သင်မသိဘဲ ဤရေကန်၏ အတိမ်အနက်ကိုကော ငါ သိနိုင်မည်လား။
ဤသို့ မိန့်တော်မူလိုက်ရာ စကားတတ်လှသော ပညာရှိအမတ်ကြီးသည် ရှေ့သို့ စကားဆက်၍ မရသဖြင့် ရှိခိုးဦးချကာ ပြန်ခဲ့ရလေသည်။
ဟာသဖြင့် ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကို အနိုင်ယူလေ့ရှိသော ဦးပေါ်ဦး သည် ဦးဗုဓ် နှင့်တွေ့ကာမှနောက်ကောက်ကျလေတော့သည်။
အင်းဝ နေပြည်တော်ရှိ ရဟန်းငယ်တို့သည် သီတင်းဝါလကျွတ်၍ စာဝါ ရပ်နားနေခိုက် ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်များသို့ လှည့်လည်သွားလာကြရာ ဦးဗုဓ် ၏အုတ်ကျောင်းသို့ ရောက်လာကြ၏။
စာကြည့်နေသော ဆရာတော်ကို ဦးခိုက်ပြီး ပိပြားစွာ ထိုင်နေကြရာ ဆရာတော်က `ဘာကိစ္စ ကြွလာကြသလဲ´ မေး၏။
`တပည့်တော်များ မရောက်ဖူး၍ အလည်လာကြပါသည် ဘုရား´ ဟု လျှောက်ထားလေသော် `အိမ်း…မရောက်ဖူးရင် မြင်းမိုရ်တောင်အထိ သွားကြပါလား။
အလကား အချည်းနှီး အချိန်ကုန်အောင် လှည့်လည်၍ ဖြုန်းနေကြသည်´ ဟု မိန့်ဆိုမည်တမ်းသဖြင့် ကြာရှည်စွာ မနေဝံ့၊ဦးချကာ ပြန်သွားကြသည်။
တစ်နေ့တွင် ဦးဗုဓ်က စာချနေဆဲ သာသနာပိုင်က သူ့ထံ ကြွလာရာ သံဃာငယ်တို့က သင်ဖြူးခင်းကြ၏။
ကိုရင်။ ။သာသနာပိုင် လာလို့ နေရာခင်းပါတယ်။
ဦးဗုဓ် ။ ။သာသနာပိုင်က ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
(ထိုအသံကြား၍ ဦးညေယျက ကျောင်းပေါ်မတက်တော့ဘဲ လှေကားမှ ပြန်ကြွသွား၏။ဦးဗုဓ်ကို သူ့ထံ ကြွရန် စာရေးပင့်လေသည်။)
ဦးဗုဓ် ။ ။ဦးညေယျက ကျုပ်ကို ဘာကိစ္စ. ခေါ်တာတုံးဗျ။
ယျ ။ ။တခြား အကြောင်းထူး မရှိပါ။တပည့်တော်မှာ လူငယ်ဖြစ်လျှက် သာသနာပြုရသောကြောင့် ချွတ်ချော်တိမ်းပါး အမှားများမြင်တွေ့လျှင် ဆို ဆုံးမတော်မူစေလိုပါတယ်။
ဦးဗုဓ် ။ ။ကိုယ်စွမ်းလို့ ကိုယ်ဖြစ်တာ ပြောစရာ မလိုပါဘူး။
အုတ်ကျောင်းမှ ရဟန်းငယ်များ ဆေးလိပ်သောက်သည်ကို သာသနာပိုင်က ပိတ်ပင်ရာ`ဆေးလိပ်သောက်တာက သာသနာပိုင် ဘုရားတည်တာလောက် အပြစ်မကြီးပါဘူး´ ဟုမိန့်ဆို၏။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်၌ ရဟန်းတို့ အလှူပေးခြင်း ၊ ဘုရားတည်ခြင်းမှာ အပြစ်မလွတ် ဟု ဆိုလေသည်။
မယ်နုသည် သူ့ဆရာတော်ရင်း ဦးဗုဓ်၏ ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာမကြီးအဖြစ် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ၊ပဒေသာပင်များမှစ၍ လိုလေသေးမရှိထောက်ပံ့၏။
ဆရာတော်မူကား ဘာမျှ သိုမှီးခြင်းမရှိဘဲ ရောက်လာသမျှ ပစ္စည်းတို့်ကို ကျောင်းတွင်သံဃာများသို့ အလှည့်ကျဝေပေးသည်။ အလိုရှိသူတို့က ကြိုက်ရာယူသွားလျှင်လည်း ဆရာတော်ကမည်သို့မျှ မဆိုချေ။
နှစ်စဉ် မယ်နုက ကျင်းပသော ဘုံကထိန်ပွဲကြီး၌ ဦးဗုဓ် ကို တရားဟောရန် တိုက်တွန်းရာ ဆရာတော်က .`ဟေတု ပစ္စယော´ဟူသော ၂၄ ပစ္စည်းဂါထာကို ရွတ်တော်မူကာ ဆိတ်ဆိတ်နေလျှင် ရှင်ဘုရင်ကလည်း ရေစက်သွန်းချ အမျှဝေရလေတော့သည်။
ထိုအခါ လေးပြင်လေးရပ် ကြွလာတော်မူကြသော ဆရာတော်ကြီးများ က`ဦးဗုဓ် ကို စာတတ်သည်ဟု ကြည်ညိုလွန်းလှ၍၊ ဧရာမ ကျောင်းတော်ကြီးကို လှူဒါန်း၍၊ ဧရာမ မိဖုရားကြီးက. ဧရာမ ကထိန်ပွဲကြီး ကျင်းပရာမှာ တကတဲဗျာ ဟောလိုက်သည့်တရားက `ဟေတု ပစ္စယောတဲ့ဗျာ´ ဟု ဝိုင်း၍ ပြစ်တင်စကားပြောကြ၏။
ဆရာတော် ဦးဗုဓ် ၏အဖြေကား (ဧရာမ ကျောင်းတော်ကြီး လှူဒါန်းပြီး ဧရာမ မိဖုရားကြီးက ဧရာမ ကထိန်ပွဲကြီး ကျင်းပရာမှာ ဧရာမ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးဟောလိုက်တာ ဘယ်သူက ဘာပြောချင်ကြသေးသလဲ ) ဟူ၍ဖြစ်ရာ မည်သူမျှပြန်လည် မချေပနိုင်ဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေကြရသည်။
ကထိန်ပွဲအတွင်း သင်္ကန်းဟောင်းကို ဝတ်ရုံသော ကျောင်းနေ ရဟန်းငယ်ကို ဦးဗုဓ် က မိမိ ရှေ့တော်သို့ ခေါ်ယူ၍ `ဤ ကထိန် အလှူကြီးကို ကိုယ်တော်ကလေး ခံယူပါ´ ဟု တိုက်တွန်း၏။
ဦးဗုဓ်၏နောင်တော် ဆရာတော် ဦးသူက`ကိုယ်တော်ကို ရည်မှန်းစီမံ ခင်းကျင်းထားရာမှာ သာမန်ရဟန်းငယ်လေးကို ကထိန်ခံယူစေလျှင် အလှူရှင်စိတ်ကောင်းနိုင်ပါ့မလား´ ဟု မိန့်ရာ `ကိုယ်တော်တို့ ယခုနေတာ ဘုရားသာသနာတော်မှာ နေသလား ၊ မိဖုရား မယ်နု သာသနာတော်မှာ နေသလား ´ ဟု ပြန်မေးသဖြင့် မဖြေနိုင် ရှိရသည်။
မင်းနှင့်မိဖုရားရှေ့၌ပင် ဦးဗုဓ်က.ထိုစကား မိန့်ဆိုသော်လည်း မည်သို့မျှ စေတနာ ပြောင်းလဲ တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိချေ။ ဆရာတော်ကလည်း `ဟေတု ပစ္စယော ´ တရားတော်နှင့်ပင် နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။
ချမ်းမြေ့ဇေယျာသာမဏေကျော်တက္ကသိုလ် ပဲခူးမြို့၏ ပို့စ်မှတဆင့်ကူးယူဖော်ပြခြင်းပါ..။
ဦးဗုဓျ လို ဆရာတျောမြိုးရှိသငျ့ပွီ
အမတျကွီး ဦးပျေါဦး ကြောငျးသို့ရောကျစဉျက ဖွဈသညျ။ ဆရာတျောက ရကေနျအနီး တံမွကျလှညျးနခေိုကျဖွဈ၍ ထိုနရော၌ပငျ ဦးဗုဓျကို ဝပျခြ အလေးပွု၏။ ထိုနောကျ-
ဦးပျေါဦး။ ။ရကေနျကွီးကဖွငျ့ အလှနျ ကောငျးပါပသေညျ ဘုရား။
ဦးဗုဓျ ။ ။အေး…..ကောငျးတယျ။
ဦးပျေါဦး။ ။ရကေလညျး အလှနျ ကွညျတယျ။
ဦးဗုဓျ ။ ။အေး…..ကွညျတယျ။
ဦးပျေါဦး။ ။ဤရကေနျကွီး မညျမြှ နကျပါသနညျးဘုရား။
ဦးဗုဓျ ။ ။ငါ……မသိဘူး။
ဦးပျေါဦး ။ ။ဆရာတျော သီတငျးသုံးတျောမူသောကြောငျးတိုကျအတှငျး ဖွဈ၍ နီးသညျ့အတှကျ သိလိမျ့မညျ ထငျမှတျ၍ လြှောကျမိပါသညျ ဘုရား။
ဦးဗုဓျ ။ ။နီးတိုငျး သိရမညျဆိုလြှငျ သငျ၏နှုတျခမျးမှေး ဘယျနှပငျ ရှိသနညျး။
ဦးပျေါဦး။ ။သတိမထားမိ၍ ဘယျနှပငျရှိကွောငျးမသိပါ ဘုရား။
ဦးဗုဓျ ။ ။သငျ့နှုတျခမျးမှေး ဘယျနှပငျရှိသညျဟု သငျမသိဘဲ ဤရကေနျ၏ အတိမျအနကျကိုကော ငါ သိနိုငျမညျလား။
ဤသို့ မိနျ့တျောမူလိုကျရာ စကားတတျလှသော ပညာရှိအမတျကွီးသညျ ရှသေို့ စကားဆကျ၍ မရသဖွငျ့ ရှိခိုးဦးခကြာ ပွနျခဲ့ရလသေညျ။
ဟာသဖွငျ့ ဘိုးတျောမငျးတရားကွီးကို အနိုငျယူလရှေိ့သော ဦးပျေါဦး သညျ ဦးဗုဓျ နှငျ့တှကေ့ာမှနောကျကောကျကလြတေော့သညျ။
အငျးဝ နပွေညျတျောရှိ ရဟနျးငယျတို့သညျ သီတငျးဝါလကြှတျ၍ စာဝါ ရပျနားနခေိုကျ ဘုနျးကွီးကြောငျးတိုကျမြားသို့ လှညျ့လညျသှားလာကွရာ ဦးဗုဓျ ၏အုတျကြောငျးသို့ ရောကျလာကွ၏။
စာကွညျ့နသေော ဆရာတျောကို ဦးခိုကျပွီး ပိပွားစှာ ထိုငျနကွေရာ ဆရာတျောက `ဘာကိစ်စ ကွှလာကွသလဲ´ မေး၏။
`တပညျ့တျောမြား မရောကျဖူး၍ အလညျလာကွပါသညျ ဘုရား´ ဟု လြှောကျထားလသေျော `အိမျး…မရောကျဖူးရငျ မွငျးမိုရျတောငျအထိ သှားကွပါလား။
အလကား အခညျြးနှီး အခြိနျကုနျအောငျ လှညျ့လညျ၍ ဖွုနျးနကွေသညျ´ ဟု မိနျ့ဆိုမညျတမျးသဖွငျ့ ကွာရှညျစှာ မနဝေံ့၊ဦးခကြာ ပွနျသှားကွသညျ။
တဈနတှေ့ငျ ဦးဗုဓျက စာခနြဆေဲ သာသနာပိုငျက သူ့ထံ ကွှလာရာ သံဃာငယျတို့က သငျဖွူးခငျးကွ၏။
ကိုရငျ။ ။သာသနာပိုငျ လာလို့ နရောခငျးပါတယျ။
ဦးဗုဓျ ။ ။သာသနာပိုငျက ကိုယျ့နရော ကိုယျနတော မဟုတျဘူး။
(ထိုအသံကွား၍ ဦးညယေကြ ကြောငျးပျေါမတကျတော့ဘဲ လှကေားမှ ပွနျကွှသှား၏။ဦးဗုဓျကို သူ့ထံ ကွှရနျ စာရေးပငျ့လသေညျ။)
ဦးဗုဓျ ။ ။ဦးညယေကြ ကြုပျကို ဘာကိစ်စ. ချေါတာတုံးဗြ။
ယြ ။ ။တခွား အကွောငျးထူး မရှိပါ။တပညျ့တျောမှာ လူငယျဖွဈလြှကျ သာသနာပွုရသောကွောငျ့ ခြှတျခြျောတိမျးပါး အမှားမြားမွငျတှလြေှ့ငျ ဆို ဆုံးမတျောမူစလေိုပါတယျ။
ဦးဗုဓျ ။ ။ကိုယျစှမျးလို့ ကိုယျဖွဈတာ ပွောစရာ မလိုပါဘူး။
အုတျကြောငျးမှ ရဟနျးငယျမြား ဆေးလိပျသောကျသညျကို သာသနာပိုငျက ပိတျပငျရာ`ဆေးလိပျသောကျတာက သာသနာပိုငျ ဘုရားတညျတာလောကျ အပွဈမကွီးပါဘူး´ ဟုမိနျ့ဆို၏။
ဝိသုဒ်ဓိမဂျ၌ ရဟနျးတို့ အလှူပေးခွငျး ၊ ဘုရားတညျခွငျးမှာ အပွဈမလှတျ ဟု ဆိုလသေညျ။
မယျနုသညျ သူ့ဆရာတျောရငျး ဦးဗုဓျ၏ ပစ်စညျးလေးပါး ဒါယကာမကွီးအဖွဈ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြား၊ပဒသောပငျမြားမှစ၍ လိုလသေေးမရှိထောကျပံ့၏။
ဆရာတျောမူကား ဘာမြှ သိုမှီးခွငျးမရှိဘဲ ရောကျလာသမြှ ပစ်စညျးတိျု့ကို ကြောငျးတှငျသံဃာမြားသို့ အလှညျ့ကဝြပေေးသညျ။ အလိုရှိသူတို့က ကွိုကျရာယူသှားလြှငျလညျး ဆရာတျောကမညျသို့မြှ မဆိုခြေ။
နှဈစဉျ မယျနုက ကငျြးပသော ဘုံကထိနျပှဲကွီး၌ ဦးဗုဓျ ကို တရားဟောရနျ တိုကျတှနျးရာ ဆရာတျောက .`ဟတေု ပစ်စယော´ဟူသော ၂၄ ပစ်စညျးဂါထာကို ရှတျတျောမူကာ ဆိတျဆိတျနလြှေငျ ရှငျဘုရငျကလညျး ရစေကျသှနျးခြ အမြှဝရေလတေော့သညျ။
ထိုအခါ လေးပွငျလေးရပျ ကွှလာတျောမူကွသော ဆရာတျောကွီးမြား က`ဦးဗုဓျ ကို စာတတျသညျဟု ကွညျညိုလှနျးလှ၍၊ ဧရာမ ကြောငျးတျောကွီးကို လှူဒါနျး၍၊ ဧရာမ မိဖုရားကွီးက. ဧရာမ ကထိနျပှဲကွီး ကငျြးပရာမှာ တကတဲဗြာ ဟောလိုကျသညျ့တရားက `ဟတေု ပစ်စယောတဲ့ဗြာ´ ဟု ဝိုငျး၍ ပွဈတငျစကားပွောကွ၏။
ဆရာတျော ဦးဗုဓျ ၏အဖွကေား (ဧရာမ ကြောငျးတျောကွီး လှူဒါနျးပွီး ဧရာမ မိဖုရားကွီးက ဧရာမ ကထိနျပှဲကွီး ကငျြးပရာမှာ ဧရာမ ပဋ်ဌာနျးတရားတျောကွီးဟောလိုကျတာ ဘယျသူက ဘာပွောခငျြကွသေးသလဲ ) ဟူ၍ဖွဈရာ မညျသူမြှပွနျလညျ မခပြေနိုငျဘဲ ဆိတျဆိတျနကွေရသညျ။
ကထိနျပှဲအတှငျး သင်ျကနျးဟောငျးကို ဝတျရုံသော ကြောငျးနေ ရဟနျးငယျကို ဦးဗုဓျ က မိမိ ရှတေ့ျောသို့ ချေါယူ၍ `ဤ ကထိနျ အလှူကွီးကို ကိုယျတျောကလေး ခံယူပါ´ ဟု တိုကျတှနျး၏။
ဦးဗုဓျ၏နောငျတျော ဆရာတျော ဦးသူက`ကိုယျတျောကို ရညျမှနျးစီမံ ခငျးကငျြးထားရာမှာ သာမနျရဟနျးငယျလေးကို ကထိနျခံယူစလြှေငျ အလှူရှငျစိတျကောငျးနိုငျပါ့မလား´ ဟု မိနျ့ရာ `ကိုယျတျောတို့ ယခုနတော ဘုရားသာသနာတျောမှာ နသေလား ၊ မိဖုရား မယျနု သာသနာတျောမှာ နသေလား ´ ဟု ပွနျမေးသဖွငျ့ မဖွနေိုငျ ရှိရသညျ။
မငျးနှငျ့မိဖုရားရှေ့၌ပငျ ဦးဗုဓျက.ထိုစကား မိနျ့ဆိုသျောလညျး မညျသို့မြှ စတေနာ ပွောငျးလဲ တုနျလှုပျခွငျး မရှိခြေ။ ဆရာတျောကလညျး `ဟတေု ပစ်စယော ´ တရားတျောနှငျ့ပငျ နိဂုံးခြုပျခဲ့သညျ။
ခမျြးမွဇေ့ယြောသာမဏကြေျောတက်ကသိုလျ ပဲခူးမွို့၏ ပို့ဈမှတဆငျ့ကူးယူဖျောပွခွငျးပါ..။
ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင် လူကြိုက်နည်းပေမယ့် အသီးရော အရွက်ပါ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ရဲယို ရဲယိုက အသီးရော အရွက်ပါ စားသုံးနိုင်တဲ့အသီးဖြစ်ပြီး အသီးရဲ့ အနံ့စူးစူးကြောင့်ကြိုက်တဲ့သူနည်းပါတယ်။ တကယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ရဲယိုသီးမှည့်ရဲ့ ပူရှိန်းရျန်းအရသာကို နှစ်သက်ကြပြီး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးလိုပဲ ရဲယိုရွက်ကလည်း ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ခါးပေမယ့် လေနိုင်တဲ့ အရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲယိုသီးဟာ အသီးရော …
အခု သိမထားရင် အသက်ကြီးလာတဲ့တနေ့ သင် နောင်တရမဲ့ အရာ(၁၀) ခု
အသက်ကြီးလာတဲ့တနေ့သင် နောင်တရမဲ့အရာ(၁၀)ခု (1)အခွင့်ရေး ရတုန်း ခရီး မထွက် ခဲ့တာ (2)သင့်အပေါ်မကောင်းတဲ့ချစ်သူရည်စား ဇနီး မယား လင်ယောက်င်္ကျား ကို မပြတ် နိုင်ခဲ့တာ (3)တပါးသူရဲ့ သင့်အပေါ်အမြင်တွေကို အင်မတန် အလေးထားနေ ခဲ့တာ (4)ချစ်တယ် လို့ ပြောဖို့ ကြောက်နေ …
ဇက်ကျီးပေါင်း အတွက် ဆေးနည်း တိုများ–
ဇက်ကျီးပေါင်း ဖြစ်လို့ ဆေးအမျိုးမျိုး သုံးကြည့်သော်လည်း မသက်သာရင် ရိုးရာ ဆေးနည်းတို များဖြင့် ကုသနိုင်ကြပါတယ်။ (၁) မီးကျီးခဲပေါ်ကို နနွင်းမှုန့်ဖြူးပြီး ထွက်လာတဲ့အငွေ့ကို မကြာခဏ ရှူပေးပါ။ (၂) နနွင်းမှုန့် စစ်စစ် ကော်ဖီဇွန်း တစ်ဇွန်းစာခန့်ကို ပျားရည်စစ်စစ် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းထဲ ထည့်၍ …
အနူဝဲစွဲနေသူ နှင့် ဇီဇာကြောင် အသန့်ကြိုက်သူတို့ ရေအိုးစင်က ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာ အတူသောက်မိသောအခါ
တခါက အထက်အညာ မြို့ကလေးတမြို့တွင် အလွန်ဇီဇာကြောင်သော လူတဦးရှိသည်။ သူသည် အစား အသောက်စားရာ၌ သူတပါးနှင့် ဇွန်းပန်ကန် ခွက်ယောက်ချင်း ရောနှောပေါင်းစပ် မစားနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အများနှင့် ၀ိုင်းဖွဲ့ပြီး ဘယ်တော့မှ မစားပါ။ မလွှဲမရှောင်သာ၍ စားရလျှင် ထမင်းနှင့် ဟင်းများကို ပထမဦးစွာ အပြီးနှိုက်ယူထားလိုက်သည်။ သူတပါး …
ဆလုံလူမျိုးအကြောင်း ဆလုံ လူမျိုး သည် မြိတ် ကျွန်းစု ၏ အဖိုး မဖြတ် နိုင်သော ပြယုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ည်။ သူတို့ ၏ ဓလေ့ စရိုက်၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှု ကိုတုနှိုင်းရန် အရာ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်း လူမျိုးတို့မှာ လူသိများထင်ရှား …